Ciidamada Liibiya oo gacanta ku dhigay Saif al-Islam Qadaafi – SBC
Ciidamada Liibiya oo gacanta ku dhigay Saif al-Islam Qadaafi
Ciidamada kooxda NTC ee la wareegtay Maamulka Liibiya ayaa saacadihii la soo dhafay gacanta ku dhigay Mid ka mid ah wiilasha uu dhalay hogaamiyihii la dilay ee wadanka Liibiya Saif al-Islam Qadaafii kaasi oo in muddo ah ku dhuumaaleysanayay Deegaano ka tirsan Wadanka Liibiya.
Maleeshiyada NTC ayaa waxaa la sheegay in hogaamiyahan ay ka soo qabteen Koonfurta wadanka gaar ahaan magaalada la yiraahdo Obari waxaana sarakiisha NTC ay u kaxeeyeen Magaalada Sintan oo ka mid ah Fariimada Ciidamadooda.
Saif al-Islam waxaa uu noqonayaa qofkii ugu danbeeyay oo ay kooxaha Wadankaasi maamula ay doonayeen islamarkaasinaa ay gacanta ku dhigeen si loo marsiiyo xukun maxkamadeed la xiriira danbiyada loo haysto oo ay ka mid yihiin dil dad rayid ah.
Raiisul wasaaraha wadanka Liibiya ayaa waxaa uu sheegay in Saif al-Islam ay saari doonan Maxkamad cadaalad ah islamarkaasina ay ku qaadi doonan dhamaanba eedeymaha loo haysto inuu wadanka ka geystay.
Maxkamadeynta Wiilka Qadaafi waxaa weli ka taagan muran horey waxaa u dalbatay in lagu wareejiyo Maxkamada Danbiyada Dagaalka ee ICC Saif al-Islam si ay ugu maxkamadeyso Danbiyada uu dalkaasi ka geystay Muddadii uu aabhiis madaxweynaha ka ahaa dalkaasi Liibiya.
Goobjoogayaal u waramay Wakaalada wararka ee Reuters ayaa sheegay in Saif al-Islam markii la qabanayay aysan jirin wax rasaas ah oo ka dhacday halka lagu qabtay islamaraasina ay ciidamada si degan ay gacanta ugu dhigeen.
Wiilka qadaafi Saif al-Islam ayaa waxaa la sheegay in uu qabo dhaawacyo ka soo gaaray duqeyntii ay ciidamada Nato ku garaacday xilli isaga iyo aabhiis ay ka baaxsanayeen Gudaha wadanka liibiya oo ay ka socdeen dagaalo lagu hoobtay oo u dhaxeyay ciidamadiisa iyo koxaha mucaaradka
Noofember 20, 2011 at 7:08 pm
WAXA AAN KA XUMAHAY QABASHADA SAYF AL ISLAAM